Darbi Bir ah iyo Ciidamo Hubaysan baa Sugaya Nabadda Jidka Maaratoonka London – Radio Daljir
Abriil 22, 2017 9:50 g 0
Berri oo Axad ah, 23 Abriil 2017, waa oradkii Maaratoonka magaalada London, sidaas darteed magaaladu waxay ku jirtaa feejignaan dheeri ah, ayada oo maanka lagu hayo toogashadii Khamiista ka dhacday Shaansa Lisee Paris iyo tii candhomeydalaha dad dukaamaysanaya la jiirsiiyey ee Jarmalka. Sidaas darteed war ka soo baxay booliska London waxay xaqiijiyeen in taas oo kale aysan London ka dhici doonin oo 26ka mayl ee oradka lagu wareejiye darbi bir ah iyo ciidamo hubaysan.
Waxaa oradka ka qaybqaadanaya 50,000 oradaa. Boolisku wuxuu dhammantood ku wargaliyey in halka oradku ku dhammaado aysan jiri doonin cid cid kale kula kulmi doonta, waana in meelo kale lagu ballamo, si loo yareeyo ciriiriga.
Sarkaal u hadlay Scotland Yard-ka booliska London wuxuu sheegay in meel kasta la dhigay boolis iyo ciidamo hubaysan. Shacabka ayaa laga codsaday in ay booliska la shaqeeyaan, soona sheegaan shaki kasta oo ay dareemaan.
Daljir kala soco maaratoonka London